“အိမ်မှာနေစဉ် အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်အောင် ကြိုးစားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး” - Cele Connections
“အိမ်မှာနေစဉ် အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်အောင် ကြိုးစားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး”
သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Beauty Blogger မလေး နေခြည်ဦးကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်..။ချီချီကတော့ အရာရာတိုင်းကို ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး သူမရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေအတိုင်း ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ လျှောက်လှမ်းတတ်တဲ့ သူမရဲ့ အပြုအမူလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေက အားကျရတဲ့ အိုင်ဒေါတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့သူ ပဲဖြစ်ပါတယ်.။ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့အတူ သူမရဲ့ Beauty Blogger အလုပ်တွေကို အောင်မြင်အောင် တစ်ပြိုက်နက် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပြီး အမာခံပရိသတ်တွေနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး…။
ချီချီကတော့ သရုပ်ဆောင်ရာမှာ ကျရာ ကာရိုက်တာအလိုက် ပီပြင်အောင် ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတယ်..။ ဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို စိတ်နှစ်ကာ သရုပ်ဆောင်နိုင်လို ပရိသတ်တွေရဲ့ ချီးမွှမ်းမှုတွေကို ရရှိနေတဲ့သူပါ..။ လက်ရှိမှာ ကားရိုက်တွေနားပြီး သူမရဲ့Beauty Blogger အလုပ်ကို ပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေပြီး ခန္ဓာကိုယ် အလှအတွက် အိမ်မှာနေရင်း ကြိုးစားလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်ဖြစ်နေတဲ့ သူမရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့အတူ “ဒီနေ့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးပြီလား ?? အခုတလောကလုံးက အလိုချင်ဆုံး အချိန်တွေ ပိုင်ဆိုင်နေရပြီ။ ဘဝကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေထိုင်ဖို့ အချိန်တွေဆွဲမနေနဲ့တော့ !!!EXCUSES ARE FOR LOSERS !!We are the CHAMPION ..naychioo . beautybynaychi . naychifit .. stayhome …Covid19” ဆိုပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။
ချီချီင်္ကတော့ သူမကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲမှုတွေကို အိမ်မှာနေစဉ် လုပ်ဆောင်နေပြီး သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေကိုလည်း Motivate လေးပေးကာ အတူ လုပ်ဆောင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ပုံပါပဲနော် ပရိသတ်ကြီး..။Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း အမိုက်စားသီချင်းလေးနဲ့အတူ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးးလိုက်ပါတယ်..။ ပရိသတ်ကြီးလည်း နေခြည်ဦးကို အားပေးရင် မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးပေးခဲ့ကြပါဦးနော်..။
“အိမျမှာနစေဉျ အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျပွောငျးလဲမှုဖွဈအောငျ ကွိုးစားလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျနတေဲ့ နခွေညျဦးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေး”
သရုပျဆောငျမငျးသမီး Beauty Blogger မလေး နခွေညျဦးကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော..။ခြီခြီကတော့ အရာရာတိုငျးကို ကွိုးစားလုပျဆောငျခဲ့ပွီး သူမရဲ့ ရညျရှယျခကျြတှအေတိုငျး ယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့ လြှောကျလှမျးတတျတဲ့ သူမရဲ့ အပွုအမူလေးတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှကေ အားကရြတဲ့ အိုငျဒေါတဈယောကျဖွဈနတေဲ့သူ ပဲဖွဈပါတယျ.။ အနုပညာအလုပျတှနေဲ့အတူ သူမရဲ့ Beauty Blogger အလုပျတှကေို အောငျမွငျအောငျ တဈပွိုကျနကျ ကွိုးစားလုပျဆောငျနပွေီး အမာခံပရိသတျတှနေဲ့ အောငျမွငျနတေဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး…။
ခြီခြီကတော့ သရုပျဆောငျရာမှာ ကရြာ ကာရိုကျတာအလိုကျ ပီပွငျအောငျ ပွောငျးလဲလုပျဆောငျနိုငျတဲ့ သူပဲဖွဈပါတယျ..။ ဇာတျရုပျတိုငျးကို စိတျနှဈကာ သရုပျဆောငျနိုငျလို ပရိသတျတှရေဲ့ ခြီးမှမျးမှုတှကေို ရရှိနတေဲ့သူပါ..။ လကျရှိမှာ ကားရိုကျတှနေားပွီး သူမရဲ့Beauty Blogger အလုပျကို ပွနျလညျလုပျကိုငျနပွေီး ခန်ဓာကိုယျ အလှအတှကျ အိမျမှာနရေငျး ကွိုးစားလကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို လုပျဖွဈနတေဲ့ သူမရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးနဲ့အတူ “ဒီနအေ့တှကျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပွီးပွီလား ?? အခုတလောကလုံးက အလိုခငျြဆုံး အခြိနျတှေ ပိုငျဆိုငျနရေပွီ။ ဘဝကို ကိုယျ့စိတျကွိုကျပွုပွငျပွောငျးလဲနထေိုငျဖို့ အခြိနျတှဆှေဲမနနေဲ့တော့ !!!EXCUSES ARE FOR LOSERS !!We are the CHAMPION ..naychioo . beautybynaychi . naychifit .. stayhome …Covid19” ဆိုပွီး သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ..။
ခြီခြီင်္ကတော့ သူမကိုယျတိုငျ ပွောငျးလဲမှုတှကေို အိမျမှာနစေဉျ လုပျဆောငျနပွေီး သူမရဲ့ ပရိသတျတှကေိုလညျး Motivate လေးပေးကာ အတူ လုပျဆောငျကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျတဲ့ ပုံပါပဲနျော ပရိသတျကွီး..။Cele Connections ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး အမိုကျစားသီခငျြးလေးနဲ့အတူ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျနတေဲ့ နခွေညျဦးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို ပွနျလညျမြှဝပေေးးလိုကျပါတယျ..။ ပရိသတျကွီးလညျး နခွေညျဦးကို အားပေးရငျ မှတျခကျြလေးတှေ ရေးပေးခဲ့ကွပါဦးနျော..။
မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့ အမျိုးသားသွေးလှူဘဏ်မှာ သွေးလှူဒါန်းရင်း ကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ ဝင့်ယမုံနိုင်